२०७५ जेष्ठ २१, सोमबार
अभियन्तहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्रिचालीस लाखको चेक हस्तान्तरण
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । साउदी अरबको रियादस्थित मलास जेलमा रहेका प्रेमबहादुर राईको रिहाईका लागि सरकारलाई त्रिचालीस लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । दानावारी, माइनगरपालिका–४, को रिहाईको लागि विगो वापत साउदीको अदालतमा भुक्तान गर्नुपर्ने रकम प्रेमबचाउ अभियान मूलसमिति, काठमाडौंले पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरे हो । अभियानका संयोजक चन्द्रसिंह कुलुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रालयका सह–सचिव दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई चेक हस्तान्तरण गरेको सह–संयोजक किशोर सुनुवारले शेर्पाखबरलाई जानकारी दिए ।
प्रारम्भमा रियादस्थित अदालतले प्रेमको रिहाईको लागि साउदी रियाद ३ लाख १० हजार तोकेको थियो । जनु करिब ९५ लाख बराबर नेपाली रुपैयाँ पर्न आउँछ ।
जसमा रियादस्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वय र राईका सहयोगीहरुको सक्रियतामा विगोबाट १ लाख ५० हजार घटाउन सफल भएका थिए ।
राईका रिहाईका लागि संकलित रकम २१ जेठ २०७५ को विदेशी मुद्रा विनिमय दर १ साउदी रियाल बराबर नेपाली रु. २८।६९ का दरले हुन आउने रु ४३ लाख ३ हजार ५ सय मात्रको चेक बुझाइएको सुनुवारले जानकारी दिए ।
प्रेमबहादुर राईलाई ईलाममा सुरक्षित पु¥याई सकेपछि मूलसमितिले प्रतिबद्धता गरे अनुसार बाँकी रकम राईलाई जस्तै वैदेशिक रोजगारमा गई समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।
चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित मूलसमितिका संयोजक, चन्द्रसिंह कुलुङ, सह–संयोजक किशोर सुनुवार, प्रमुख अर्थ विभाग, अनिता ताम्बुछा, सामाजिक सञ्जाल संचालन विज्ञ टंकराज होङेलु, खाता संचालक तथा कुलुङ संघका केन्द्रीय महासचिव ईन्द्र कुलुङ, मूलसमिति सदस्य संकल्प किराती, सदस्यहरु सुर्य कुलुङ, गौतम कुलुङ, प्रमिसा मेवाहाङ कुलुङ रहेका छन् । त्यस्तै, पत्रकार कृष्ण कँडेल,. दीपक चाम्लीङ लगायत थिए ।